Izinsiza kusebenza zeMingwang Test - Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., Ltd.
Inkampani yethu inezinhlobo zonke zemishini yokuhlola yobungcweti
I-Melt Flow Index ilinganisa ukuthi mangaki amagremu e-polymer ageleza ebusweni.Ukusetshenziswa kwayo kuvame ukuba sembonini yamapulasitiki.Izimpawu zokugeleza kokuncibilika zivame ukufakwa kuhlu lwedatha lwezinto ezisetshenziswayo ze-thermoplastic. i-melt flow indexer iyidivayisi ethandwa kakhulu embonini yepulasitiki ukuthola ama-viscosities wezinto ezibonakalayo futhi ivame ukusetshenziselwa ukuhlola ukuvumelana kwe-batch-to-batch.
ICarbon black (graphite) ingenye yezithasiselo zepulasitiki ezithandwa kakhulu hhayi ngoba ingumthombo oshibhile wombala omnyama kepha futhi ngoba inikela ngezakhiwo ezinhle kakhulu zemishini nokumelana ne-oxidation-weathering. Ngakho-ke, ukuhlola izinga lokuqukethwe okumnyama kwekhabhoni kuyadingeka ukuze kugcinwe ukulawula izakhiwo zepulasitiki.
I-ASTM D1603 ne-ISO 6964 zikhona izindlela ezijwayelekile zokuhlola okuqukethwe kwekhabhoni emnyama ezintweni zepayipi le-olefin ne-PE, ngokulandelana.
Ngokuqondile, izindlela zokuhlola zichaza ukunqunywa kokuqukethwe kwekhabhoni emnyama ku-polyethylene, i-polypropylene, ne-polybutylene plastic. Isisetshenziswa esisetshenzisiwe yisithando somlilo nesikebhe somlilo esifakwe ngaphakathi.
Ekuqaleni, le ndaba ishiswa ngo-550 °C ukushisa i-polymer ubukhulu bayo oburekhodiwe ngaphambi nangemva kwale nqubo. Ekugcineni, izinsalela zishiswa ngo-900 °C kuze kushe yonke impahla emnyama ye-carbon, khona-ke iyapholiswa futhi ikalwe.
I-Dripper Flow Tester ingahlola noma yiluphi uhlobo lwedivayisi ekhipha kusuka kushubhu lokudonsa kanye neteyipu yokuconsa kuya kuma-dripers oku-on-line, ama-sprinkler kanye ne-inline drippers ngaphandle kwepayipi.
Sebenzisa amaseli wokulayisha ukukala amanzi aqoqiwe kuvumela ukunemba okuphezulu kakhulu kokulinganisa kokugeleza ngesikhathi esifushane kakhulu. Sifeza lokhu ngokuvumela amasampula afinyelela kwangu-10 ukuthi ahlolwe ngasikhathi sinye kwingcindezi efanayo.
I-Flow Tester ihambisana ne-ISO 9260 ne-ISO 9261. Ububanzi obujwayelekile bokuhlola kusuka ku-12-25 nokunye kutholakala ngokucela. Ukuhlolwa kuhlelwa ngokuphelele kuze kube izikhathi ezingama-30 ezahlukahlukene zokucindezela. Ukuhlolwa ngakunye kuveza umbiko ofaka phakathi amagrafu nokuhlaziywa kwezibalo njenge-exponent ne-CV.
Ukuhlolwa kwenani le-CV & CU
Ukuhlolwa Kokumelana Nesimo Sezulu